मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, २७ भदौ २०७५) | गृहपृष्ठ
Home लगानी मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, २७ भदौ २०७५)
मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, २७ भदौ २०७५)
२५ ओटा जिल्लामा ५१ ओटा शाखा कार्यालयबाट गुणस्तरीय लघुवित्तीय सुविधा प्रदान गर्दै आएको मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चौथो त्रैमाससम्ममा रू. ३ करोड ४ लाख नाफा आर्जन गरेको छ । यस्तो नाफा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ६१ प्रतिशत बढी हो । हकप्रद तथा बोनस वितरण गरेपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ८ करोड ९४ लाख पुगेको छ भने जगेडा कोषमा रू. ६ करोड ५९ लाख छ । कम्पनीले आगामी दिनहरूमा कर्मचारीलाई विभिन्न तालीम दिँदै दक्ष र कुशल बनाई उत्पादनशील जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै संस्थागत उद्देश्य पूरा गर्ने अठोट लिएको छ । कम्पनीको भदौ १७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले शेयरधनीहरूका लागि आव २०७४/०७५ को नाफबाट २४ प्रतिशत बोनस शेयर कर प्रयोजनका लागि १ दशमलव २६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
चुक्तापूँजीको तुलनामा खुद नाफा ३४ दशमलव २७ प्रतिशतबाट घटेर ३४ प्रतिशत पुगेको छ । कम्पनीको लगानी रू. १० लाख छ । कम्पनीले चालू आवको चौथो त्रैमासमा रू. ४१ करोड निक्षेप सङ्कलन गरेको छ भने रू. १ अर्ब ४२ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी रू. ७ करोड ९२ लाख, कर्मचारी खर्च रू. ५ करोड ३६ लाख, अन्य सञ्चालन खर्च रू. २ करोड ३० लाख र सञ्चालन नाफा रू. ३ करोड ६७ लाख छ । स्थिर सम्पत्ति ३ गुणा बढेर रू. २ करोड ३४ लाख र अन्य सम्पत्ति ५५ प्रतिशत बढेर रू. ४ करोड ४७ लाख पुगेकोे छ ।
कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव ६९ प्रतिशत छ । कम्पनीले सम्भावित जोखीमबापतको व्यवस्थामा रू. १ करोड ७५ लाख छुट्यएको छ । पूँजीकोष लागत १ दशमलव ९६ प्रतिशत र पूँजीकोष पर्याप्तता १० दशमलव १३ प्रतिशत छ ।
गत चौथो अवधिमा यस कम्पनीको मौज्दात, आम्दानी र तरलतामा उत्साहजनक वृद्धि भएको छ । हालसम्म यस कम्पनीको वित्तीय स्थिति व्यवस्थापनको योजनाअनुरूप नै छ । ग्राहक तथा सदस्यहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै व्यावसायिक योजनाअनुरूप शाखा तथा कार्यक्रम विस्तार गरेकाले कर्जा लगानी, ब्याज आम्दानी, प्रतिशेयर नेटवर्थ, मूल्य आम्दानी अनुपातलगायत सम्पूर्ण कारोबारमा वृद्धि भएको छ ।
कम्पनीको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार तरलता अनुपात ५४ प्रतिशत, प्रतिशेयर आम्दानी (वार्षिक) ५१ दशमलव ७ प्रतिशत, मूल्य आम्दानी अनुपात २९ दशमलव ५२, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रू. १ हजार ९ सय १४ दशमलव २४ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ७३ दशमलव ७५ छ ।
खरीद चाप : मङ्गलवार कुनै शेयर कारोबार भएको छैन । खरीद चाप आए पनि विक्री गर्ने सङ्ख्या नआएपछि यस दिन कारोबार नभएको हो ।
मैनबत्ती विश्लेषण : कम्पनीको ५९ दिनको कारोबारलाई हेर्दा अन्तिम दिनमा कालो मैनबत्ती बनेको छ । यस्तो आकृतिले कम्पनीको शेयरमूल्य घट्ने सङ्केत गर्छ ।
आरएसआई : कम्पनीको ५९ दिनको कारोबारमा आरएसआई न्युट्रल जोन (५२ दशमलव २२ स्केल)मा छ । यसले शेयर खरीदविक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन : कम्पनीको ५९ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन १७ दशमलव ८७ विन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून छ ।
मुभिङ एभरेज : कम्पनीको ५९ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखालाई १४ दिने औसत मूल्यरेखाले तलबाट काटेर माथि गएको छ । हालको मूल्य १४ दिने र २६ दिने औसत रेखालाई काटेर माथि पुगेको छ । सोमवार भएको कारोबारको आधार मूल्य रू. १ हजार ५ सय ३९ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महँगिएमा रू. १ हजार ५ सय ९० मा प्रतिरोध र सस्तिएमा रू. १ हजार ५ सय ७० मा टेवा पाउने देखिन्छ ।